Ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni ekhaya - Yiziphi izinyathelo okufanele zilandelwe? | Bezzia
Ungenza kanjani ikhasi elihle lobuso nomzimba ekhaya
Kunemibala eminingi, imikhiqizo nezinyathelo okufanele sizithathe uma sifuna ukunakekela isikhumba futhi ukuze zisinikeze lokho kunakekela ngobumnene. Kungakho esinye salezi zinyathelo kufanele kube ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni ekhaya. Ngoba banakho konke esikudinga ngempela ukukhombisa imiphumela ekhanga kakhulu.
Uyazi yini ukuthi ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni kuyini ngempela? Sizokwembula lokho umuntu ngamunye asilethele kona, nezinyathelo zokuthola umphumela ongcono kunalokho ebesikulindele. Ungaphuthelwa yikho konke okulandelayo ngoba ungakwenza ngokunethezeka ekhaya futhi kuzokumangaza.
1 Ngabe ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni kuyadingeka?
2 Ukuhlanza kuyisinyathelo sokuqala sesikhumba sethu
3 Imikhiqizo ethile yesikhumba sakho
4 Ukhilimu we-hydrating ongantuli njengomphelelisi wokuxebuka ebusweni nasemzimbeni ekhaya
Ngabe ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni kuyadingeka?
Vele, ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni kuyadingeka. Kungani? Ngoba Ngalesi senzo esilula sizokwenza ukuhlanza kujule, kususe amaseli afile ngokuphazima kweso, ukuze isikhumba sikwazi ukuvuseleleka futhi sibonakale sibushelelezi futhi siphilile futhi. Ngokuqinisekile ukwazi lokhu lapho uzobona ukubaluleka okubalulekile kwesenzo sobuhle esisakazeke njengalokhu. Ngoba uma singavalelisi kumaseli afile, ngeke sinikeze isikhumba sethu ithuba lokuthi siphinde sizalwe. Ngakho-ke, sizovalelisa emigqeni emihle kodwa nakwizici.
Ukuhlanza kuyisinyathelo sokuqala sesikhumba sethu
Yize kungesona isinyathelo sokugcina noma okuwukuphela kwaso okufanele sisithathe, kufanele sisinake kakhulu. Ngoba isikhumba esihlanzekile ngempela singathola isisekelo sokululama okungcono. Ngakho-ke, ukuze uyihlanze, akukho okufana nokubheja kwimikhiqizo eyisisekelo nayo eyi- ama-gels okuhlanza noma amanzi we-micellar. Lokhu kube ngomunye wemikhiqizo edayiswa kakhulu, ngoba ihlanza impela ngokujula futhi ilungele ukushiya ngemuva isikhumba se-oilier. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi futhi ngesenzo esisodwa ungasho ukugcotshwa. Ngaphandle kokukhohlwa ukuthi futhi izolungela isikhumba esibucayi kakhulu.
Imikhiqizo ethile yesikhumba sakho
Ukuze singazenzi inkinga ngokwedlulele futhi ukuxebuka ebusweni nasemzimbeni kusheshe noma kunembe kakhulu, singahlala sisebenzisa imikhiqizo ethize kakhulu. Vele kufanele siyisebenzise esikhumbeni futhi uma sike sangena kuyo, kuzodingeka senze kuphela ukusikhipha okuyindilinga okuncane ukuze umkhiqizo ungene kangcono kakhulu endaweni ngayinye. Kuyiqiniso futhi ukuthi le nqubo ingenziwa ngemikhiqizo sonke esinayo ekhaya efana neyogathi namaconsi ambalwa kalamula kalamula, isibonelo. Kuyiqiniso ukuthi lapho sikhetha imikhiqizo esiyithengayo, siyazi esimweni ngasinye ubungako noma izingoma esizidingayo.
Ngalokho ukuqeda ukukhipha enemikhiqizo ethile singathola nemiphumela emihle. Njengoba ukungcola kuzosuswa cishe kungahlosiwe. Okuthile okuyisisekelo futhi kuyadingeka uma sifuna ukubona futhi ukuthi isikhumba sethu sisahlala kahle kanjani ngokuthamba.
Ukhilimu we-hydrating ongantuli njengomphelelisi wokuxebuka ebusweni nasemzimbeni ekhaya
Ukhilimu wokuthambisa ngomunye wabangane bethu abakhulu futhi siyazi. Ngakho-ke, akukho okufana nokusizakala ngawo wonke umzuzu ukusisebenzisa. Yize kubalulekile ekuseni nasebusuku njalo ukugcina isikhumba sinamanzi, kulokhu kunjalo. Ngoba ngemuva kokwenza ukuhluza kuzobe kulungile ukuzama ukwehlisa isikhumba sethu. Ngakho-ke, kufanele sisebenzise leyo esiyaziyo ukuthi ilungele uhlobo lwethu lwesikhumba futhi yilokho kuphela. Ngemikhiqizo elungile, ngezinyathelo ezintathu nje uzokwazi ukwenza ukuhluza ebusweni nasemzimbeni ngendlela entofontofo. Kanye ngesonto futhi uzobona izinguquko ngokushesha!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ungenza kanjani ikhasi elihle lobuso nomzimba ekhaya
3 zokusebenza ukuhlela umsebenzi wakho